Ukhathalelo lobuqu lwaMadoda | Amadoda anesitayile (iphepha 2)
Fumana indlela yokuphepha i-cellulite kumadoda. La mafutha oyikekayo anokuthintelwa ngokufanelekileyo kunye nomkhwa wokuphila ngendlela enempilo.
Fumanisa ezona ndlela zilungileyo onokuthintela ngazo xa umntwana wakho ofikisayo ekudelela yaye enokuphila ngemvisiswano.
Amadoda nawo asokola nengxaki yokugcinwa kwamanzi kwaye ngenxa yoko afuna ukwazi indlela yokulwa ne-cellulite.
Ungazi njani ukuba ndinefrenulum emfutshane
Amadoda amaninzi okanye abakwishumi elivisayo baphathwa yi-frenulum emfutshane ngaphandle kokuqiniseka kokwazi ukuba banokuzilungisa ngokwabo. Kwabanye...
Ukuba ungumntu wendalo, ugcwele iimvakalelo ezintle kwaye uhlala unoncumo oluhle, unayo yonke into yokwenza inkwenkwe ithandane. Fumanisa!
Ubukho begazi kumchamo bunokubangela uhlobo oluthile lokunyanya. Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi izizathu zabo, hamba uye kufumanisa.
Fumana inyathelo ngenyathelo indlela yokucheba iinwele zenkwenkwe. Uyabona ukuba ayingomsebenzi unzima kangaka ukuba uyenza ngomonde.
Fumana iingcebiso ezilungileyo kunye neengcebiso ukwazi ukuba amadoda anamhlanje kufuneka anxibe kakuhle. Iqhinga elithile ngokuqinisekileyo liya kukunceda.
Abantwana banokuseta isitayile sabo ngokuzithemba ukwenza iinwele zanamhlanje zamakhwenkwe. Zonke zilungile, fumana!
Ukuba ufuna ukuba neendevu ezintle, apha sibonisa olona nyango lululo kunye nonyango ukuze ubonise elona lungiselelo lilungileyo.
Ukususwa kweenwele zesini sangasese
Fumanisa zonke iindlela kunye nendlela onokwenza ngayo ukususwa kweenwele zesini sangasese, nazo zonke iziqinisekiso kunye nemizekelo.
Ijeans zaMadoda ezisezantsi
Sikunika iingcebiso ezilungileyo ukuze ijean inxitywe kumadoda amafutshane. Unokwazi nendlela yokunxiba ngayo nayiphi na impahla.
Kutheni iinwele zam ziwa
Ukulahleka kweenwele yingxaki yamadoda nabasetyhini. Fumanisa onke amayeza e "kutheni iinwele zam zisiwa kwaye uzilungisa njani".
Uyisusa njani iHickey
IHickey luphawu olungenakuphikiswa lomzuzu wothando. Nangona kubonakala kungakholeleki kukho iindlela kunye neendlela zokususa ...
Uyomeleza njani iiQuadriceps zakho
Sinezona mithambo zibalaseleyo zokukwazi ukomeleza ii-quadriceps. Kananjalo ukuba unesifo samadolo sicebisa ezona ndlela zilungileyo.
Ungasusa njani irhashalala emva kokuthambisa
Fumanisa ukuba ungasusa njani kwaye uphephe ukungxama emva kokuthambisa. Ngale ngcebiso ulusu lwakho luza kujongeka lusempilweni.
Iindidi ze-bangs zamadoda
I-bangs emadodeni iseta imikhwa kwaye apha sinika uphononongo oluncinci lwento enxitywe kulo nyaka kunye neenwele zanamhlanje zokuyinxiba.
Ukuba uthathe isigqibo sokuma kakuhle kwaye ungathanda ukuphucula inkangeleko yakho, sicebisa ezona ndlela zintle kunye neendlela ...
Ukuphuma kumathandabuzo siwusombulule umbuzo wemibala ethandwa kakhulu xa unxiba indoda. Ngaphandle kwamathandabuzo, iya kusebenza kuwe.
Ukuba uthanda ukunxiba iindevu kwaye uye kwelokugqibela, sinazo zonke iindlela kunye neemilo ukuze ukope ukuba yeyiphi ekufaneleyo.
Amadoda, aneentshebe okanye engenazo iindevu?
Ngeentshebe okanye ngaphandle kwentshebe? phantsi kwale mpikiswano inkulu sinokucacisa ukuba amadoda nabafazi abaninzi bacinga ntoni, nokuba banxibe, okanye hayi.
Indlela yokunciphisa i-hemorrhoids
Iihemorrhoids okanye ezibizwa ngokuba ziimfumba zezo zinamaqhuma okanye amaqhuma abonakala edumbile kufutshane ne-anus, ke ...
Fumanisa amayeza asekhaya ukuphelisa inkwethu kunye noburharha obubangelayo. Ezi zithako zendalo kwaye ngekhe zikucaphukise.
Fumanisa ukubaluleka kokutya ivithamin D kwindlela yethu yokutya kunye nokuba iluncedo kangakanani emzimbeni wethu.
Indlela yokucheba iinwele ekhaya
Funda ngesifundo sethu esincinci ukuba ungazicheba njani iinwele ekhaya. Ngaphandle kwamathandabuzo iya kuba yinto onokuzama ukuyenza kwaye uqinisekise ukuba inokwenziwa.
Kule nqaku sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga neentshebe kunye nendlela yokulungisa. Funda ngakumbi ngayo apha.
Ukutya emkhosini kuyilelwe ukukhawuleza kulahle iikhilo ezi-3 ukuya kwezi-5 ngeentsuku ezintathu. Fumanisa ukuba ungayenza njani kwaye iqulathe ntoni.
Uyenza njani amashiya akho
Fumanisa onke amaqhinga kunye neendlela zokufumana amashiya kubuso bendoda. Uyazi ukuba yinxalenye yokhathalelo oluhle.
Wazi njani ukuba uza kuba nenkqayi
Kukho izinto ezininzi ezibonisa ukuba uza kuba nenkqayi. Ukungena nzulu kwesi sihloko, fumana ezinye izisombululo.
Iinwele zeHipster zamadoda
Inwele yehipster ikwimfashini kwaye unyaka nonyaka iphinda ibuyiswe ngohlobo olukhethekileyo kunye noluncomekayo. Fumanisa izimbo kunye nokudalwa kwabo.
Ukudityaniswa kubuyelwe emadodeni
Iinwele zangasemva emadodeni lolunye uguqulelo lokukwazi ukukhanyisa iinwele ezinde. Fumanisa ukuba ungayenza njani.
Umahluko phakathi kwe-ubersexual kunye ne-metrosexual: yintoni nganye?
I-Ubersexual kunye ne-metrosexual zizigama ezibini zamadoda aphezulu, amadoda kakhulu kwaye azikhathaleleyo, kodwa aneeyantlukwano esizibonisayo apha
I-frenulum emfutshane inokuba yingxaki enkulu kwamanye amadoda, nantsi sixelela ukuba usifumana njani esona sisombululo sisiso.
Ukuba ufuna ukufaka icici kwindlebe yakho kwaye ufuna ukwazi ixabiso lalo, apha sibonisa ezinye zeendawo onokuzenza kuzo.
Izinwele ezichetyiweyo zamadoda
Sikunikeza ezona zinwele zichetywe kakuhle emadodeni ukuze ukhethe eyona ilungele isitayile sakho kunye nobuntu bakho.
Amadoda ayathanda ukubonisa umlinganiso olungileyo egxalabeni. Uninzi lunomzimba wengqondo wokuba ...
Amadevu ebesoloko enxityiwe kwaye ephawule igunya kunye nobuntu. Fumanisa zonke iiklasi ngoku eziseta iintsingiselo
Ngaba ucinga ngombala weenwele owahlukileyo? Ukuba esi sisiphakamiso sakho, apha siphakamisa ezona mibala zizinwele zamadoda.
Sibonisa ezona ngcebiso zibalaseleyo zokuba ubonise intshebe epheleleyo ngeziqinisekiso, ngeendlela ezithile ezilula namacebo.
Kwindoda enesitayile sikubonisa ezona zinwele zingcono okanye ukusika okungaphumiyo kwisitayile, kuba bayaqhubeka ukumakisha ubuhle kunye nefashoni.
Uziqhelanisa njani nokujika kwe kettlebell
I-kettlebell swing luhlobo lwe-kettlebell-based workout okanye umthambo osetyenziselwa iinkqubo zokuqina
Uyifumana njani imvume ye-wavy kwizinwele ezimfutshane
Fumanisa ukuba ngawaphi amanyathelo oza kuwalandela ukufumana imvume ye-wavy kwizinwele ezimfutshane. Yinwele esele ihlelekile ngoku.
Fumanisa iindlela ezahlukeneyo zefashoni ezenzekayo kwaye ziya kuqhubeka ukutyhubela amashumi eminyaka kunye neendlela zokunxiba zamadoda.
Fumanisa ukuba ungatya njani ukutya okutyayo ukuze ukwazi ukulawula ukuhamba kwamathumbu kwaye ungangeni ekungabikho kwe-hydration okanye izondlo.
Senze ukhetho lwezona khrim zibalaseleyo kwizangqa ezimnyama zamadoda, apho iziphumo ezilungileyo zokuguga zibonisiwe.
Fumanisa zonke izitayile kunye nokusika okuvela kwiFade iinwele. Inwele eqhubeka nokuseta imeko ngazo zonke iiyantlukwano zayo.
UDavid Beckham luphawu lwefashoni yamadoda, sele ethathe umhlala-phantsi kwibhola ekhatywayo yamaNgesi ngaphezulu kwamashumi amabini ...
Sikuxelela zonke izitshixo ukuba uzithathele ingqalelo ukuthambisa isifuba sakho okanye hayi. Funda kwiingcebiso ezilungileyo apha.
Kwiminyaka eliqela eyadlulayo i-platinum blonde yaqala ukuthatha indawo yamadoda. Isete umkhwa kwaye babedumile ...
Ukolula iinwele emadodeni
Fumanisa amaziko amaninzi akhoyo ukulungisa iinwele, ngonyango, iimveliso okanye izixhobo zoko kugqibeleleyo
Kwindoda enesitayile sinika ezona zimvo zilungileyo zokufezekisa uboya obuhlaza, obugqithisileyo kunye noseto.
Uzihlazisa njani iindevu
Ukuthotywa kweendevu kudala isitayile esisebenzayo esibonisa umtsalane kubuso bendoda. Fumanisa ukuba ungayenza njani ngokufanelekileyo.
Unwele olunentloko olunamadoda
Fumanisa yonke into oyifunayo ukuze ukhathalele iinwele ezinamafutha, ukusuka kwiimveliso, ukhathalelo lwabo kunye neemveliso ezifanelekileyo.
Iimpawu zobumba zamadoda
Ukwenziwa kwamadoda yinto ekhoyo nakwiingxowa ezininzi zamadoda zokuhlamba. Fumanisa ezinye iimveliso ezikhoyo kwintengiso.
Indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kokutya ngaphambi kokuba kufike imozulu elungileyo
Sikuxelela ezona ndlela zingcono zokuphelisa amanqatha ngaphandle kotyando kunye nokunciphisa ubunzima kwimozulu elungileyo. Ngena kwaye wazi yonke into malunga nayo.
Sikuxelela awona maqhinga asebenzayo ukusebenzisa ishampu eyomileyo kwaye ufumane ezona ziphumo zihle. Funda ngakumbi ngayo apha
Fumanisa izibonelelo kunye nokungalunganga kolu nyango lwe-micropigmentation, oluya lusetyenziswa ngakumbi phakathi kwamadoda.
Iindidi zobuso bendoda
Siza kuzazi iintlobo zohlobo lobuso bendoda ukuze uvavanye ukuba loluphi uhlobo lweenwele onokuthi ulunxibe ngokwemilo yakho.
Ukucoca ubuso emadodeni
Sikuxelela yonke into ekufuneka uyithathele ingqalelo ukwenza ucoceko lobuso emadodeni. Yazi yonke into apha.
Izinwele zabafana banamhlanje
Sinecandelo elinomdla kakhulu kwezona zinwele zintle kubo bonke abo bafana bafuna ukuhlala kule mihla.
Eyona fuma ilungileyo yamadoda
Kwabaninzi, isithambiso ebusweni bendoda sele sisiba yinto yesiqhelo. Khangela ukuba yeyiphi eyona ilungileyo kwiziphumo zakho
Fumanisa lonke ukhathalelo kunye neendlela zokunxiba iinwele zakho ukufezekisa ukubonakala okungacwangciswanga kunye nokungangqinelani, kuya kuphawula imilo kunye nesitayile sakho.
Ukuba ufuna utshintsho kwinkangeleko yethu sifuna ukukunikezela ukuba imvume leyo yinto engayi kukushiya ungakhathali, siza kuchaza indlela yokwenza.
Izinwele ezingwevu zithathe indawo enkulu kwimfashini yamabhinqa kunye namadoda afuna ukunxiba lo mbala kwaye apha sikubonisa ukuba ungazidaya njani.
Izitayile zeenwele zamadoda aneenwele
Kuwo onke amadoda aqala ukuba nekhefu ezinweleni zawo sikunika iingcebiso ezilungileyo zokunxiba ezona zinwele zilungele amadoda
Zithini izibonelelo ze tattoos?
Iitattoos yile mizobo ebethelelwe eluswini, yazisa imibala phantsi kwesikhumba, fumana izibonelelo zazo.
Ukunyamekela izandla neenyawo zamadoda
Kwindoda enesitayile sikwanika elona cebiso lililo ukuze ukhathalele iinyawo nezandla zakho. Umzimba wakho uyakuxabisa.
Iikhabhathi ze-uva-ray zezinye ezizezinye ukuze abantu babonise loo tan intle emzimbeni nanini na sifuna.
Izinwele ezingwevu emadodeni zithathe umtsi ngaphandle, ngoku iyenziwa yonke impumelelo kwiintloko ezininzi ngaphandle kokuxhomekeka kubudala.
Iingxowa phantsi kwamehlo emadodeni
Sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga neebhegi zamehlo emadodeni nokuba zeziphi izizathu kunye nonyango.
Ivesti iye yaba yingubo yotshintsho olululo xa kufikwa kumba wokunxiba okumnandi, yiyo loo nto ingafanele ukuba ilahleke kwizambatho zethu.
Sibona ii-tatoo engalweni zijongwa kumawaka eminyaka kwiinkcubeko ezahlukeneyo, kwaye kwinkcubeko yethu siyibona yendele ngakumbi.
Ngale nto kwifashoni yamva nje kwiinwele ezimfutshane apha sikushiya ezona zibalaseleyo zokumakisha isitayile kunye nokuqala.
Ukunxiba ngobuhle luphawu lwesazisi, kunxiba iimpahla ezifanelekileyo ezisinika umbono wokuba sinxibe kakuhle kwaye sinencasa.
Sikuxelela ukuba zeziphi ezona zinwele zilungele amadoda anempandla. Funda ngakumbi malunga neenwele eziza kunceda ukunciphisa ukubonakala kwempandla.
Andiqinisekanga ngento oza kuyinika uyihlo? Apha sikubonisa imibono emininzi yezipho zabazali. Ngena kwaye ufumane iingcebiso ezilungileyo.
Eyona nto itshetsha umzimba emadodeni
Siphonononga ezona zinto zilungileyo zokucheba umzimba onokuzifumana kwintengiso yokugqiba kunye nokusebenza kwinqanaba lakho.
Amafutha ayimfuneko kwabaninzi. Kwaye ukuba isiqholo esilungileyo senza umntu anqweneleke, anconywe ...
Kubathandi be tattoo unokufumana intsingiselo, isiko kunye neefom eziqulathwe yile tattoo yaseSamoa. Ifashoni kwinkcubeko yethu
Imvume yeWavy yamadoda
Imvume ye-wavy lukhetho olufanelekileyo emadodeni afuna i-curl ekhangayo. Fumana ukuba bunjani ubuchule bakhe.
Amacici e-Hoop yamadoda
Amacici njengamacici aqhubeka nokuseta imeko phakathi kwamadoda. Apha unokufumana iimodeli zamva nje oza kuzithanda.
Kukho iinwele ezinde ezenza inkanuko nomona. Fumanisa ukuba zeziphi kwezi zinwele onokuzinxiba kuloo mane umkhulu.
Sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga namabala kunye nendlela yokuwafihla. Funda ezinye iingcebiso malunga nayo.
Kukho ukhetho olukhulu lweemaski zobuso zamadoda kwintengiso. Fumanisa zonke izitayile kunye neemilo esikunikeza zona kuMadoda aneSitayile.
Sichaza "iMetrosexual" ngandlel 'ithile kuwo onke loo madoda abathengi abanzima bokuthambisa kunye neziqholo ngenkathalo yabo.
Yazi into ekuthiwa yeyokwabelana ngemithi ngesondo
Umntu owabelana ngesondo nomtshato uhlelwa ngokuhlala enxibe ijean, ihempe ezinxibe kunye neebhutsi zesikhumba.
Kule nqaku sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-seborrheic alopecia, iimpawu zayo kunye nendlela yokuyinyanga.
Amadoda nawo afuna ukuba nomzimba ogqwesileyo kwaye koku basebenzisa ukunciphisa iikhrimu ukufezekisa oku. Fumanisa ukuba ziyasebenza na.
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba akubalulekanga ukutya into ngaphambi kokuba uzilolonge kwaye unokuba ungalunganga. Yitya ngaphambi ...
Ngaba umtshato ukhona ngaphandle kwesondo?
Amagama "umtshato ngaphandle kwesondo" iba lelinye lawona mabinzana akhangelwe kwi-intanethi. Yinto eyenzekayo ...
9 iingcebiso ngobuhle wonke umntu kufuneka azi
Ukuba ufuna ukuqala ukuzikhathalela, ungazisebenzisa ezi ngcebiso zobuhle zili-9 ukuze uzive ulungile kwaye ukonyuse ukuzithemba kwakho.
Unokuba yindoda egqibeleleyo njani?
Nguwuphi umntu ongazange aphuphe ngokubonakala eyindoda egqibeleleyo? Kwaye ke zonke ...
Umjikelo wamehlo amadoda enzelwe loo madoda exesha lethu. Ngoku kuxa sele bethatha ...
Iiproteni zezinye zezinto ezibalulekileyo emzimbeni wethu. Sibonisa ukutya okuneeproteni ezininzi ekutyeni kwethu.
Izaphetha zamadoda ziindlela ezenza ukuba zithandeke. Ukuba uneenwele ezinde kwaye ufuna ukuzichola, jonga iintlobo zeentolo ezikhoyo.
Iitattoo ngasemva zibonisa ukomelela kunye nesibindi. Fumanisa ukuba zeziphi izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ezichazayo kunye neentlobo ezahlukeneyo zeetatoo ezinokubakho.
Ukoyisa iziyobisi kungumceli mngeni omkhulu, nangona lonke uncedo lwangaphandle lubandakanya uqeqesho olusebenzayo. Sikubonisa izikhokelo onokuzilandela.
Ukubumba iindevu yingcinga amadoda amaninzi ayichaze njengokulungisa. Funda ukuba ungayenza njani ngeyona ndlela ibalaseleyo ngamaqhinga amahle.
Amagqabantshintshi eBlonde emadodeni
Amagqabantshintshi e-Blonde emadodeni lukhetho olusekhona kwifashoni. Siphakamisa eyona ndlela yokuyisebenzisa ekhaya kunye neengcebiso ezilungileyo.
Xa intshebe ingakhuli emadodeni
Zininzi izizathu zokuba kutheni intshebe ingakhuli emadodeni kwaye loo nto iyenza ibenzima kwabo bafuna ngokwenene ukuba nayo. Fumana izizathu zayo eziphambili.
Fumanisa indlela ikhukhamba kukutya okumnandi okunokuqulatha izibonelelo ezibalulekileyo kwimpilo yethu. Funda zonke izixhobo zayo.
Iiamangile ziyinxalenye yosapho lwamandongomane, ukutya okubaluleke kakhulu kukutya kweMeditera. Fumanisa iipropathi zayo.
Ukuba uthanda ukuba neenwele ezigobileyo okanye ezirhangqayo amaxesha ngamaxesha, sicebisa ezona mveliso zibalaseleyo ukugoba iinwele zakho kwaye ke sifezekise imbonakalo engenasiphako.
Indlela onxiba ngayo umtshato wosuku ayifanelekanga. Kuya kufuneka uyazi ukuba unakekela njani ezo nkcukacha zincinci zinokukwenza ukuba ungahambi ngesitayile nobuhle
Ibhlukhwe yamadoda yingubo egqiba isimbo lomntu. Kuyabonakala ukuba kubonakala ngathi ...
Iingxaki emsebenzini zinokunxulunyaniswa neemeko zongquzulwano. Apha singakunika izitshixo zokuphucula le motif.
Ukuthanjiswa kweenwele yindlela elula ebandakanya ukuhambisa umyalezo entlonzeni ukuze kusebenze ukujikeleza kunye nokuphelisa ukulahleka kweenwele.
Kukangaphi kufuneka uhlambe iinwele zakho
Ngokuqinisekileyo uye wacinga kaninzi ukuba ukuhlamba iinwele rhoqo kuya kuba kuhle okanye kungabi kwimpilo yakho….
Ukukhulisa ukuzithemba yenye yezinto eziphambili ukuze ukwazi ukujongana nobomi ngolonwabo kunye nokuxabisa yonke into esijikelezileyo. Funda ngento esinokuyenza
Ngokubanzi, izangqa ezimnyama emadodeni zibonakala zingabukeki njengakwabasetyhini. Fumanisa ukuba kutheni bephuma kunye nendlela yokulungisa inkangeleko yabo.
Ukukhwela ibhayisekile luhlobo lwezemidlalo oluxhamla kwiinkalo ezininzi, kokubini ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni. Fumanisa ubuchule obunokubonisa
Nangona ungakholelwa, ukufumana iinwele ezihamba phambili okanye ukufumana imvume, kuyenzeka. Fumanisa zonke iindlela zokufumana iinwele ezigobileyo.
Sikuxelela ukuba ungasusa njani amaqhakuva ngeengcebiso zendalo kunye nezisebenzayo. Lahla oku kungcola kube kanye.
Ukuyinyamekela iindevu zakho akunzima xa ulandela amanyathelo nje ambalwa alula. Kwindoda enesitayile sikucebisa ukuba ungayenza njani ngokuchanekileyo.
Iitattoo ezincinci zamadoda
Ukuba uyathanda ukuhombisa ulusu lwakho kwaye unike nenqaku loyilo, kodwa ngaphandle kokunikezela kakhulu kumzobo, ii-tatoo ezincinci zamadoda sisiphakamiso esifanelekileyo.
Ungayisusa njani i-blackheads kwimpumlo
Ngaba iintloko ezimnyama ziyakukhathaza? Kule nqaku sikubonisa iingcebiso kunye neendlela zokuwasusa amabala amnyama empumlweni.
Ukuboniswa yindlela okanye indlela yokujonga ngaphakathi kuwe, yokuzibona njengeyona njongo iphambili. Ukuziqhelanisa nothotho lwamanyathelo kuya kukukhokelela kwinjongo yakho.
Izibuko zelanga ezintabeni ziyinto ebalulekileyo ukukhusela amehlo kwizinto ezinobungozi. Funda ukukhetha ezona zilungileyo.
Ungayidaya njani iindevu zakho
Ukudaya iindevu yinto eyenziwayo iminyaka kwaye iya isetyenziswa kuzo zonke iindawo zoluntu. Fumanisa ukuba ungayenza njani.
Eyona ndoda intle emhlabeni
Singamfumanisa njani oyena mntu mhle ehlabathini? Impendulo ixhomekeke kwaye iya kuhlala igqitywa ngamehlo ombukeli.
Ukukhathalelwa kobuso emadodeni kufuna inkqubo yesiqhelo efanayo kunye noqeqesho njengalo naluphi na unyango. Naluphi na ukhilimu awuxabisekanga kwaye apha sikubonisa ukuba ungayenza njani.
Ukuchitha ixesha elide uzivalele kunye neqabane lakho ngumceli mngeni omkhulu wokusinda. Siphakamisa ukuba ungathatha njani ukuvalelwa njengesibini ngcono.
Ukuba ufuna ukuba neenwele ezinde, nazi iingcebiso ezilungileyo zokukwazi ukunika olo tshintsho kwaye uzinike omnye umfanekiso. Uya kuba nezona zimvo zibalaseleyo zokhathalelo lwabo.
Utata onesifo i-Alzheimer, kufuneka siyikhathalele njani
Ukukhathalela umzali one-Alzheimer ayisiyonto inokusichaphazela sonke, kodwa inokwenzeka nakuwe buqu. Apha sikunika iingcebiso ezixabisekileyo.
Ukutya ubunzima bokutya
Izidlo sangokuhlwa ziyinxalenye yokutya kwethu kunye nokutya okutya mihla le, sicebisa ukuba izidlo zokunciphisa umzimba zikwenze ngendlela elula nesempilweni.
Ezona ziqholo ze-unisex zibalaseleyo ukuba sabelane ngazo njengesibini
Yonke into efuna ukulingana iya iphumelela. Kwaye oku kutolikwe kakuhle lihlabathi ...
Fumana ezona zisikiweyo ziindevu, eziza kukunceda ubumbe iindawo ezahlukeneyo zeendevu zakho kwaye uphumeze iziphumo ezahlukeneyo.
USergio Ramos iinwele
Ukuqokelelwa kukaSergio Ramos kweenwele kubandakanya izitayile zazo zonke izinto ozithandayo, ukusuka kufutshane kakhulu ukuya kwiinwele ezinde, ukuya kwiitoupe kunye nemivimbo esecaleni.
Amagqabantshintshi ngamadoda lukhetho olunempikiswano. Apha siphonononga ngakumbi kwesi sihloko ukukunceda uthathe isigqibo.
Iziqholo zamadoda ezithandwa kakhulu ngamantombazana
Ivumba elimnandi esilinikayo ikwayindlela yokulukuhla umntu, ekuhambeni kwexesha nayo iba ...
Iinwele eziluhlaza ziyakuvumela ukuba ungabonakali. Fumanisa abantu abadumileyo ababhejayo kulo mbala ubalaseleyo ngeenwele zabo.
Uzifaka njani iinzipho
Fumanisa ukuba ungazifaka njani iinzipho ezingamadoda ngokuchanekileyo, kunye nezona ngcebiso zibalaseleyo kunye neendlela zokugcina izandla zakho zikhangeleka zingenasiphako.
Fumanisa ukuba yeyiphi eyona colognes ilungileyo yamadoda kusapho ngalunye olfactory: intsha, iintyatyambo, iinkuni kunye neMpuma.
Yazi yonke into malunga neenwele zamasamura. Uyenza njani, zithini iimfuno kunye nokunye okuninzi malunga neenwele zezinwele ezinde.
Uyisusa njani i-chin ephindwe kabini ngokukhawuleza
Ngena apha ukufumana iingcebiso ezilungileyo kunye nokuzilolonga ngendlela yokususa isilevu esiphindiweyo. Susa eli lungu lomzimba elinzima kakhulu.
Kule nqaku sikufundisa ukuba uziqhelanisa njani nokuzilolonga ebusweni ukuze uhlale umncinci ixesha elide. Ngena apha ukuze ufunde indlela yokwenza.
Fumana yonke into ngamashiya abantu: zezokuba ziyintoni, ungazi njani ukuba kufuneka uzilungise okanye hayi kwaye ungazenzi okuninzi malunga nazo.
Fumana ezona zinwele zilungileyo zale mihla zamadoda. Izimvo zokusikwa kwesitayile kwabo bonke ubungakanani kunye neentlobo zeenwele.
Indlela yokucheba iindevu
Fumanisa indlela yokucheba iindevu inyathelo ngenyathelo. Ukusuka kwizixhobo eziyimfuneko kunye namalungiselelo kweyona ndlela ilungileyo yokukothula kunye nokuchaza intshebe.
Fumanisa konke malunga neenwele ezi-wavy zamadoda: iingcebiso kubomi bemihla ngemihla kunye neenwele ezinesitayile kunye nemibono yeenwele.
Ukucheba iinwele ngee-bangs
Fumanisa ezona zinwele zilungileyo kunye nee-bangs zamadoda, kunye nezibonelelo zazo: ezimfutshane, eziphakathi kunye nezide.
Iivithamini zeenwele zinokunceda ukunciphisa ukulahleka kweenwele. Ngena apha kwaye ufunde ukuba zeziphi iivithamini eziyimfuneko ukuze ube neenwele ezilungileyo.
Fumana ukhetho olungcono phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zeendevu: iintsuku ezintathu, iindevu ezinde kunye nezitayile ezininzi!
Unokuba mhle ngakumbi
Fumana ezona ngcebiso zibalaseleyo kunye neendlela ezilula zokufunda ukuba mhle ngakumbi. Ngena apha kwaye wazi yonke into. Ngaba uyafuna ukuyithanda? Yifumane!
Ungazikha njani amashiya akho
Funda indlela yokuchola amashiya inyathelo ngenyathelo. Ungabanika njani inkcazo, apho bafanele ukuqala khona kunye nokuphela, ubukhulu obulungileyo kunye nokunye okuninzi!
Funda indlela yokwenza isimbo senwele esifutshane ngenyathelo ngenyathelo ukufezekisa iinwele ezingenasiphako ezihambelana nokubonakala kwakho okungaqhelekanga kunye nokusesikweni.
Ukucheba iinwele okuphakathi
Iinwele ezinde eziphakathi ziyaguquguquka, ziyathandeka, kwaye zihamba. Fumanisa olona khetho lufanelekileyo lwalo mlinganiselo.
Fumanisa ezona zinwele zilungisiweyo zilungele amadoda. Ukusuka ukusika okufutshane kakhulu ukuya kwizinwele ezinde, uhamba ubude obumnandi obuphakathi.
Kule posi ungafunda inyathelo ngenyathelo ukuba uyenza njani i-toupee ukuze isitayile sakho sivelele kubo bonke abanye. Ngena ngoku kwaye wazi zonke iimfihlelo.
Fumanisa ukuba ungawasusa njani amabala egazi kwiimpahla. Funda ezona ndlela zibalaseleyo nezisebenzayo ukuze kungabikho umkhondo uhlala, kwigazi elitsha okanye elomileyo
Uzilungisa njani iindevu
Fumanisa ukuba uzilungisa njani iindevu zakho ukuze zibonakale zingenasiphako. Ungayisika njani, indlela yokuzoba intamo kunye nomgca wesidlele nokunye okuninzi!
Ezona ziqholo zamadoda
Funda indlela yokukhetha iziqholo zakho ezifanelekileyo ekukhetheni iziqholo ezifanelekileyo zamadoda. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngayo? Ngena ngoku.
Ungazikhulisa njani iindevu
Iindevu zandisa isitayile kunye nesibheno sesini samadoda amaninzi. Kule posi ungafunda indlela yokukhulisa iindevu ngokuchanekileyo.
Funda malunga neentlobo ezahlukeneyo zebhokhwe, indlela yokufumana nganye, kwaye yintoni efunekayo ukubathintela ekujongeni ngokungakhathali.
Fumana ezona ndlela zilungileyo zokuhombisa zamadoda apha. Ukuba ufuna ukutshintsha inkangeleko yakho, leli lixesha lakho. Ungaphuthelwa lithuba kwaye ungene!
Fumanisa ezona zinwele zifutshane zibalaseleyo emacaleni kwaye zide phezulu kumadoda. Fumanisa ukuba zenziwe njani, ukhetho lweenwele kunye nezibonelelo zazo.
Ukukhuhla ubuso okwenziwe ekhaya
Fumanisa indlela yokulungiselela into yokuthambisa ubuso, ziziphi izibonelelo zayo kunye neengcebiso ezininzi zokuzisebenzisa ngokuchanekileyo.
Fumana yonke into malunga nokusikwa komkhosi. Ziziphi iingenelo kwaye ziphi iiyantlukwano ezahlukileyo zokucheba iinwele okuzalelwe emkhosini?
Izithambiso zokunyanzelwa kwamadoda
Fumana yonke into malunga ne-depilatory creams yamadoda. Isebenza njani, zeziphi izibonelelo abanazo, iingcebiso eziluncedo kwaye zeziphi ezona zixhobo zibalaseleyo.
Fumanisa ezona deodorants zibalaseleyo emadodeni, iingenelo neengozi zeefomathi ezahlukeneyo kunye noncedo lweefomula zendalo.
Ukujija yinkqubo yotshintsho eya isiba nefashoni. Funda konke ngaye kule posi.
Funda malunga neemaski ezintle zeenwele, zombini ezenziwe ekhaya kwaye zilungiselelwe, kunye neengcebiso ezininzi ezinxulumene nokusetyenziswa kwazo.
Iinwele ezimhlophe emadodeni
Fumana yonke into malunga neenwele ezimhlophe. Oonobangela, iinketho ezikhoyo zeenwele ezingwevu, izicwangciso zokuthambisa kunye nezondlo nokunye okuninzi!
Ukuzusula ngokwakho, indlela yokukhawuleza ukukhawuleza
Fumanisa iingenelo neengozi zokuzicoca, kunye neengcebiso ezilungileyo zokufumana eyona tan.
Fumana ukuba zeziphi iimveliso zeendevu ozifunayo kwindawo yokugcina izixhobo ukuze ufumane olona hlobo lubalaseleyo lweenwele zakho zobuso.
Fumanisa ukuba loluphi uhlobo lokucoceka oluqhelekileyo lwamadoda anesikhumba esomileyo kunye nokutya okuluncedo ukuyigcina isempilweni.
Fumana yonke into malunga nokunyuka komntu ngamadoda. Olona khetho lufanelekileyo kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba, kunye neengcebiso kunye namacebo amaninzi.
Indlela yokufumana amazinyo amhlophe
Fumanisa imikhwa, iingcebiso, amaqhinga kunye nonyango onokuthi usebenze xa ufuna ukufumana amazinyo amhlophe. Ukuba ufuna ukwenza mhlophe uncumo lwakho, kunye neengcebiso zethu uya kulufezekisa.
Fumanisa ukuba ungayenza njani inwele efipheleyo yamadoda kwisitayile esiqhelekileyo kwaye ngawaphi amaqhinga onokuthi uwenze ukuze uhlengahlengise ukumila kobuso bakho.
Eyona ndlela yokucheba iindevu
Fumana ezona zinto zichetywa ziindevu kwintengiso. Iimodeli ezikalwe kakhulu ezihlelwe ngamanqanaba, kunye neengcebiso zokuzisebenzisa ngokuchanekileyo.
Eyona shavers intle
Shavers ziphambili kucoceko lwendoda. Apha sifumana ezona modeli zibalaseleyo kwintengiso, ezahlulwe ngokwezigaba.
Ibhotolo yeShea, imveliso eqhubeka isetyenziswa kwizithambiso zamadoda. Zeziphi iipropathi ezinazo? Zingaphi iindidi ezikhoyo? Yeyiphi indlela echanekileyo yokusebenzisa ukuba ube neziphumo ezilungileyo? Fumana iimpendulo zale mibuzo kunye nezinto ezinomdla ngakumbi malunga nebhotolo ye-shea apha.
Khangela ukuba zeziphi iinwele ezinde zamadoda akwifashoni kwaye yeyiphi ekufaneleyo. Ukuba ufuna ukuba mhle ngakumbi kwaye uneenwele ezintle, khetha enye yezi zinto zisikiweyo zeenwele ezinde kwaye uya kuphumelela.
Yazi ukuba loluphi ulusu lolusu, yeyiphi imisebenzi abayenzayo kunye nokhathalelo abalifunayo ukulibazisa ukuguga kunye nokuhlala besempilweni.
Unyango lwasekhaya lobuso bendoda yenkulungwane yama-XNUMX
Indoda yenkulungwane yama-XNUMX inyamekela ulusu lobuso bayo. Oku kubandakanya ukusetyenziswa kweemveliso zendalo kunye nezorhwebo kunye namayeza okulungisa, isondlo kunye nonyango lwe-epidermis.
Izithambiso zomzimba ezine zokuphucula indlela ococeka ngayo
Siphakamisa izithambiso zomzimba ezine eziza kukunceda uphucule indlela ococeke ngayo xa uziva ukuba uhoya kakhulu ulusu lobuso kunolo lomzimba.
Sikufundisa indlela yokucheba iinwele ngesitshetshe sombane, iingcebiso omele ukuzilandela xa uzicheba kakuhle intloko kunye nezixhobo ekufuneka uzisebenzisile ukusika iinwele zakho.
Ukuba unamaqhakuva emqolo, siya kukufundisa ukuba kutheni, ubuqhinga bokuzisusa kunye nendlela yokuthintela amabala emzimbeni wethu. Ngaba uza kuyiphosa?
Yazi ezinye zeemveliso ezifanelekileyo ukubumba iindevu zakho kwaye wenze iinwele zakho zobuso zihlale zibonakala zingenasiphako.
Kulo nyaka u-2017 ngunyaka weenguqu, izimbo kunye neendlela ezintsha. La ngamaxesha amatsha. Zinjani iinwele ekwindla?
Gcina ulusu olunamafutha kunye nezi mveliso zisebenzayo
Siphakamisa ezine zeemveliso ezilungileyo zokulawula iziphumo ebezingalindelekanga zolusu olunamafutha, ezidibeneyo zenza inkqubo yemihla ngemihla eqinileyo.
Ungakuthintela njani ukuwa / ubusika ekushiyeleni ulusu lwakho lomile kwaye luqinile
Ukuba ufuna ukuthintela ulusu lwakho ekubeni lukhangeleke lomile kwaye luqinile koku kuwa / ubusika, cinga ukubeka ezi ngcebiso kwindlela yakho yokuzilungisa yemihla ngemihla.
Ukunyamekela iinwele zakho emva kwehlobo
Ukuba iinwele zakho emva kwehlobo zirhabaxa kwaye azikhanyisi, kungenxa yokuba ezinye zehlobo zilonakalisile. Ungazikhathalela njani iinwele zakho emva kwehlobo?
Sisiphi isiqholo sokunxiba udliwanondlebe lomsebenzi?
Kudliwanondlebe lomsebenzi, umqeshi uya kuvavanya iziqinisekiso zethu zesikhundla esinikezelwayo. Amafutha ngumcimbi obalulekileyo.
Amafutha alungileyo kumhla wokuqala
Ukuba uza kuba nomhla wokuqala, uya kuzibuza imibuzo emininzi. Izambatho, izihlangu, zeziphi izinto ezinokuthandwa ngomnye umntu, njl.
Izixhobo kunye neemveliso zokucheba okungcono
Sikunika uthotho lweemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye nezixhobo zokucheba okungcono, oko kukuthi, kufutshane kwaye ngaphandle kweziphumo ezingafunekiyo.
Inwele yokukhetha ngokweminyaka yakho
Ukuba amadoda awukhathali malunga neenwele oza kuzikhetha? Asiyonyani leyo. Yinto leyo, njengabantwana, siphantse siyiqaphele.
Kwamanye amadoda, ukukhetha isiqholo ngumsebenzi olula: bayazama, bayayithanda kwaye yiyo loo nto. Kwabanye, akukho lula kangako.
Ezi zezinye zezona mpazamo zibalulekileyo ekufuneka uziphephe xa uye kwenye yeendlela ezithandwa kakhulu zeenwele zobuso: 'iindevu zeentsuku ezintathu'.
Iziqholo ezifanelekileyo zasehlotyeni zinokusinceda ukuba sinikezele, kwimeko yethu yentlalo, ukujonga kunye nobukho obuya kwenza umahluko.
Ukunyamekelwa kweenwele emva kwephuli
Amanzi echibini enza ukuba umzimba wethu uphumle kwaye unike imvakalelo eyahlukileyo, ke oko kuthintele uxinzelelo kunye noxinzelelo. Kodwa i-chlorine ayiloncedo.
Ilanga litshisa ulusu lwakho, unokwenza ntoni?
Ukuba sichaphazelekile elangeni, unxibelelwano ngqo lunokusebenza kakhulu. Isiphumo siya kuba kukutshisa isikhumba sakho. Emva koko ubomvu kunye nokutsha kuya kuvela
Sinceda ukuba ufumanise ukuba unobuso obuxande kwaye sikunika ezinye zeengcebiso ezilungileyo kwezona ndlela zilungileyo zokuthamba kunye nohlobo lweendevu.
Ikhefu ngo-2017: Isikhokelo sokuSuswa kweNwele sokugqibela
Ukuba ufuna umzuzu wokugqibela ukuthambisa iholide yakho, esi sikhokelo siza kukunceda, ngakumbi xa kuziwa kwizixhobo kunye nenkqubo.
Zeziphi izizathu onokuthi uzifumane kwaye zeziphi izizathu zokuba kutheni kufuneka uthambile? Asingombuzo wobuhle nje kuphela, zininzi izinto ezidlalayo.
Kuhlala kusithiwa isiqholo samadoda sisiyobisi sabasetyhini, kodwa oku kuya kuxhomekeka kunongo lomntu ngamnye kubo. Zininzi iindidi zevumba.
Ihlobo, kubantu abaninzi, lelona xesha lilindelweyo enyakeni. Kodwa ke lelona xesha lokonakalisa iinwele zakho ngenxa yamaqondo obushushu aphezulu.
Iindlela zobuso beenwele zobuso 2017: Iindevu ezimfutshane
Iindevu ezimfutshane yenye yezona ntloko zinkulu zobuso zika-2017. Nantsi indlela yokuyigcina ngelixa ikubonisa ukubukeka okubalulekileyo.
Iingcebiso zokunuka kamnandi imini yonke
Ukuba uyathandabuza uyanuka, yinto exabisekileyo ngamantombazana, ekuhlaleni kwaye ihlawula izabelo ezilungileyo. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba sizive sikhuselekile, sicocekile.
Ukuthwala iindevu kuthatha umsebenzi omninzi kunye nomzamo kunokucheba yonke imihla. Kwaye ukuba kukho uhlobo lweendevu olufuna ingqalelo kwiinkcukacha, yiHipster.
Izinzuzo zobuso ebusweni ngaphambi kokulala
Namhlanje, ukufaka ubuso ubuso phambi kokuba ulale akusengomgaqo okhethekileyo wabasetyhini.
Ukukhulisa iindevu kusefashonini. Kodwa ayisiyokulinda ukuba ikhule kwaye ngoku. Ifuna ukunakekelwa nokhathalelo (kakhulu okanye nangaphezulu njengokucheba ntsasa nganye).
Kulabo baneenwele ezinde kwaye bekhetha ukutshintsha inkangeleko, ngaphandle kokuyisika, zininzi iindlela onokukhetha kuzo ngaphakathi kwendlela ye-2017.
Sikuxelela ukuba zeziphi izisombululo ezikhoyo kwezona mpazamo zixhaphakileyo ezenziwa ngamadoda aneenwele ezintle.
Uzilungiselela njani iinyawo izihlangu zasehlotyeni
Esi sikhokelo siza kukunceda uqinisekise ukuba iinyawo zakho azingqubani ngeli hlobo, kananjalo uzikhusele xa unganxibanga kawusi.
Eyona ndlela ilungileyo yokucheba iinwele emadodeni
Njengakwilizwe lefashoni, ilizwe leenwele zamadoda nazo ziyavela. Ngexesha ngalinye lesizini singqina iintsingiselo ezintsha.
Nangona iifashoni isiza idlule, ukunxiba iindevu yinto ehlala ihleli. Nokuba kusehlotyeni, xa amaqondo obushushu aphezulu evela.
Uyikhetha njani i-deodorant eya kukukhapha ebomini?
Udliwanondlebe lomsebenzi, usuku lokuthandana, okanye unxibelelwano nje lwemihla ngemihla ekuhlaleni nabanye abantu lufuna ucoceko olulungileyo ...
Ungakuthintela njani ukulahleka kweenwele
Amaxesha amaninzi kwenzeka ukuba ngenxa yobuvila asilungisi ukulahleka kweenwele de sibone ukuba sele iyingxaki yokwenyani.
Kukho ulwazi olwandayo ngemfuneko yokusebenzisa i-sunscreen elungileyo. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kubalandeli bendawo yokuhlambela elungileyo.
Ngaba uyazi ukuba ukhethe okungcono emva kokutsheva kwesikhumba sakho?
Emva kokucheba kakuhle uya kuba nakho ukuthintela olu hlobo lokucaphuka, kunye nokulungisa umonakalo owenziwe kukucheba kwesikhumba.
Izitayile zeenwele zamadoda: ii-braids
Kanye njengokuba kwabakho ixesha apho ii-toupee zazingumkhwa, nkqu zinemibala enomtsalane. Ngoku kukho iinwele ezingaphumiyo kwisitayile: ii-braids.
UWilkinson Hydro 5, oyena uchebe kakuhle kunye nonyaka webhola ekhatywayo
Iiladi zeWilkinson Hydro blade ziyila uyilo lwe-ergonomic kunye neejika ezijikeleziweyo. Isibambo sayo siyasebenza, ukuze sibambelele ngokugqibeleleyo.
Iingcebiso zokucheba okugqibeleleyo
Nangona iindevu zingena ngokufuthi kwimfashini, ukucheba ngokugqibeleleyo yenye yezo zithethe ekufuneka zilandelwe yindoda nganye.
Ukucheba okugqibeleleyo kunokuba nemiphumo esempilweni kunye nobuhle. Ke ngoko, ukuzinikela ngokwaneleyo kunye nokuqwalaselwa kuyafuneka.
Uyisebenzisa njani ioyile ye-ndevu, i-balm kunye ne-shampoo
Sichaza ukuba zeziphi kunye nendlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo ioyile yeendevu, i-balm kunye ne-shampoo, ezizinto ezintathu eziyimfuneko kukhathalelo lweendevu.
Khetha uhlobo lweendevu olulungele ubuso bakho. Fumanisa ukuba ungacheba njani xa ujikeleze, une-oval, ubude kunye nezinye iintlobo zobuso eziqhelekileyo
Ngaba kuyanceda ukuhlamba ngamanzi abandayo?
Nangona isenokungabonakali injalo, ukuhlamba ngamanzi abandayo kunokusizisela izibonelelo ezibalulekileyo kwimpilo yethu, ngaphakathi nangaphandle.
Iinwele zikaBrad Pitt ezilungileyo kakhulu kule minyaka
Sijonga ezona zinwele ziphambili uBrad Pitt azenzileyo kule minyaka idlulileyo. Ukusuka kwimivimbo esecaleni yeklasikhi ukuya kwi-surfer manes.
Ukuphuma ujonge okona kulungileyo, kunye nomfanekiso osempilweni, kukho amaqhinga athile anokwenziwa ngumntu wonke ngaphambi kokulala.
Kutheni le nto kufuneka ukhuphele iNwele entsha yeZayn Malik
Ukuba isizathu sokuba uZayn Malik atshintshe iinwele zakhe rhoqo kungenxa yokuba wayefuna ...
U-Ewan McGregor weeNwele eziBalaseleyo kwiMinyaka
Siphinda siqwalasele ezona zinwele zilungileyo zomlingisi waseScotland u-Ewan McGregor onxibe kule minyaka ingama-20 idlulileyo, ukusukela kwintloko echetyiweyo ukuya kwiipompadours.
Ngale mithambo uya kulahla amanqatha ngokukhawuleza
Kukho iintsuku ezimbalwa kunye nezimbalwa kude kufike intwasahlobo kwaye ngayo kuya kufuneka siyivuselele ...
Iingcebiso zokucheba kakuhle
Ukuze ufumane okokucheba okugqwesileyo awudingi ukuba yingqondi, landela nje amanyathelo ambalwa esiwanika iinkcukacha kweli nqaku.
Indlela yokucheba iindevu zakho
Nangona kusenokubonakala kulula, ukuyicheba iindevu yinkqubo enokuthatha ixesha elide kuneliqhelekileyo ukuba asiyenzi kakuhle.
Ukuba unentshebe, ukwenza i-cheek line efanelekileyo iya kukunceda uhambise ucoceko, ukhangeleke ngakumbi. Apha sikukhokela inyathelo ngenyathelo.
Ezona zinwele zidumileyo zango-2016
Izinwele zakhe zisikhuthaze ngezizathu ezahlukeneyo unyaka wonke. Ezi zezona zinwele zidumileyo zango-2016.
Ungabuhambisa njani ngokufanelekileyo ubuso bakho, iinwele neendevu
Ukuthambisa ubuso bakho, iinwele, kunye neendevu rhoqo kubalulekile ukwenza umfanekiso ohloniphekileyo. Ezi ngcebiso ziya kukwenza ube yinkosi ye-hydration.
?? Fumanisa ukuba zeziphi ezona zinwele zilungileyo zobuso obujikelezileyo, ungazisika njani iinwele zakho ukuba unobuso ngezi zinto? Fumanisa!
Kwelinye icala, wavy, agudileyo kwaye made. Ezi zezona zinwele zilungileyo kunye nee-bangs zamadoda.
Iingcebiso zokulwa nealopecia
Ukuba uza kuba nenkqayi, ungaphoswa zezi ngcebiso ukunqanda ialopecia kunye nokunciphisa ukulahleka kweenwele kumadoda ane-AGA.
Ngaba ujonga iinwele zeenwele ezimfutshane? Apha uya kufumana ukujonga okuhle kwamadoda aneenwele ezimfutshane kunye neemveliso oza kuzifuna
Sijonga kwakhona iinwele ezimfutshane zamadoda ane + ngaphezu kweefoto ezingama-36 kunye neengcebiso zokuseta iintsingiselo. Ngaba ufuna iinwele ezimfutshane? Ngena apha
Iindlela ezintathu zokucheba iinwele ngeBalmain Hair Couture
Ngaba ucinga ngotshintsho olubonakala ngathi ludikwe kukucheba iinwele zakho? Ukuba impendulo ithi ewe, ...
5 imikhwa enokukwenza ubonakale umdala
Le mikhwa mihlanu ikwenza ubonakale umdala. Sukwenza kube lula kwimibimbi kunye nemigca entle kwaye ukhokele ubomi obukhulu kubo.
Yonke into oyifunayo ukwenza izandla zakho zenze olona phawu lubalaseleyo
Ungasazifihli izandla zakho ngenxa yokoyika ukuba azibonakali. Ezi mveliso zintathu ziya kukunceda ugcine izandla zakho zikhangeleka zilungile.
Ukugcina ulusu lwakho lutyebile kwaye lukhanya, akukho mfuneko yokuba ugcwalise igumbi lakho lokuhlambela ngeemveliso. Ezi kuphela kwemveliso oya kuyidinga.
Ungayicheba njani ngcono? Silandela iingcebiso zika Mnu Porter
Ubuqaqawuli bentshebe yeHipster buza esiphelweni. Ngapha koko, ngeli xesha lonyaka yeyona nto ibalaseleyo yokucheba iinwele emhlabeni ...
UNuit D'issey, isiqhumiso esitsha esenziwe nguIssey Miyake
Emva kwempumelelo kaNuit d'Issey Eau de Toilette, ivumba elitsha lika-Issey Miyake, ifemi isandula ukumisela ingxelo ...
Isikhokelo esichazayo sokufumana amashiya ahambelana nobuso bakho
Ngaba uyafuna ukulungisa amashiya akho, kodwa awazi ukuba njani? Esi sikhokelo siza kukunceda ukuba wenze ngendlela egqibeleleyo kwaye ngokobuso bakho.
Ezi zine kufuneka zibe neemveliso zamadoda aneenwele ezintle. Ukunyusa ishampu, iitoni, ukubeka iigels kunye neeshampoo ezomileyo
Ukuzenzela, kulula kunye nendalo amaqhinga okukhupha ubuso
Iingcebiso ezizenzelayo zokukhupha
Ukulahleka kweenwele: iimpawu, iintlobo kunye nendlela yokuzikhusela
Ngaba iinwele zakho ziyawa? Fumanisa iimpawu, iintlobo zealopecia kunye nendlela yokuthintela ukulahleka kweenwele emadodeni. Luluphi unyango olukhoyo? Fumana apha
Ungayifumana njani inwele emfutshane ethambileyo ehlotyeni
Sichaza ukuba loluphi uhlobo lweenwele ezimfutshane ezikufanela kakhulu ngokubhekisele kubume bobuso bakho kunye neendlela zangoku zeenwele.
'Undercut': iinwele ezitshayela kwi-Instagram
Phantse ama-70.000 amangeniso anxulunyaniswa nale hashtag, #undercut kukucheba iinwele okutshayayo kwi-Instagram. Isitayile esiguqukayo ...
Iimpuphu zifikile kwimfashini yamadoda ... yandisa imilebe yakho
Ifashoni ye-morritos ifikelele kwicandelo lamadoda. Apha sichaza indlela yokufumana umlomo othambileyo kunye ogcweleyo ukwandisa umtsalane wakho.
Ucocekile kwaye unobungcali-Ukwahlula-hlula ecaleni kuya kuba yenye yeenwele zonyaka
Iinwele ezinamacala ahlukanayo ziya kuba yenye yezona zibonakala kakhulu kwi-2016. Inobukho obomeleleyo kokubini kwiikati nakwisitrato.
Sichaza kuwe ukuba ubude beempawu zakho zecala kufuneka bube njani ukuze ubuso bakho bube mnandi emehlweni abantu.
Ngaba uyafuna ukuba neendevu zobuxoki? Sikubonisa amaqhinga onokuwasebenzisa ukwenza ubuso bakho bukhangeleke ngathi yindevu egqibeleleyo usebenzisa iindlela ezahlukeneyo.
Sichaza indlela amadoda amadala anamaqhakuva anokuya ngayo kunyango lwamaqhakuva nakwindlela yokuzilungisa ngokubanzi ukuthintela ukuvela kwawo kwakhona.
Izizathu ezithathu zokuvalelisa kwiindevu ezinde ngo-2016
Sikunika izizathu ezithathu zokuba kutheni onke amadoda aneendevu ezinde kufuneka acinge ngokucheba ngo-2016.
Inwele entsha kaJoe Jonas inokukufundisa into okanye ezimbini
Amadoda amafutshane anokufunda izifundo ezibalulekileyo kwizinwele ezintsha zikaJoe Jonas. Apha sichaza ukuba kutheni.
Sithethile malunga neendlela zakutshanje zokuhombisa iinwele zamadoda aneenwele ezijijekileyo okanye ezi-wavy, kunye neyona ndlela yokulandela.
Sichaza izinto eziluncedo nezingeloncedo zokucheba ngombane ukukunceda uthathe isigqibo ngeyona ndlela yokutsheva ilungele imeko yakho.
Sichaza indlela yokulungisa iinwele zakho ezingaphantsi kwekhwapha ukuba uthathe isigqibo sokubandakanya eli candelo lomzimba wakho kwinkqubo yakho yokuthambisa.
Izinwele ezingwevu, imeko enezibonelelo ezingaphezulu kuneengxaki
Sigqamisa iingenelo eziphambili kunye nezinto ezingalunganga ezinxulumene nomfanekiso weenwele ezingwevu emadodeni.
Amadoda amaninzi ayalucaphukisa ulusu lwawo xa esicheba. Ukuba ufuna ukwazi ukuba kungenxa yantoni, nazi izizathu ezilishumi eziphambili zokucaphuka emva kokucheba.
Sichaza indlela yokwenza ukutshintshela kwincakuba yeklasikhi ngentuthuzelo enkulu kunye nokhuseleko.
Ngaba kubi ukuhlamba iinwele zakho yonke imihla?
Siphendula imibuzo malunga nokuba ayilunganga na entlonzeni ukuhlamba iinwele zakho yonke imihla.
Isityalo saseFransi, isitayile esihle kunye nesifanelekileyo sokufihla ungeniso
Isityalo saseFransi luhlobo lokucheba iinwele ezigcwele izibonelelo. Apha sikuxelela ukuba yintoni kwaye kutheni ihlala ikhethekile ngaphandle kwefashoni.
Iinwele ezintathu zokuhamba kunye 'neendevu zeentsuku ezimbini'
Nje ukuba le ndevu ikhethwe, siyazibuza, zeziphi iinwele esizithandayo nazo? Ewe, namhlanje siphakamisa ukubonakala okuthathu ...
Amadoda aneenwele ezinde kuye kwafuneka anyamezele uninzi lokucalulwa okungenasiseko kunye nokugxekwa kule mihla. Apha saphula umkhonto endaweni yabo.
Izinwele ezigqibeleleyo imini yonke-Iingcebiso zokusetha i-Hairstyle nge-Hairspray
Sikunika iingcebiso zokulungisa i-hairstyle nge-hairspray yonke imihla, egxile kukhetho lwemveliso, usetyenziso kunye nokususwa kwayo.
Uchebe intloko nentshebe, umbono olungileyo okanye ombi?
Ngaba licebo elilungileyo okanye elibi ukucheba intloko nentshebe? Apha sikunika uluvo malunga nayo kunye nemizekelo yabadlali abaye banxiba oku kujongeka.
Iimpazamo ezintathu ukunqanda kunye neenwele zakho
Sikuxelela into ongafanele uyenze ngeenwele zakho ukuba ufuna iinwele zakho ziphucule umfanekiso wakho kwaye wandise ukuzithemba kwakho.
Ezona milo zixhaphakileyo zepenisi
Emadodeni, ukumila kwepenisi kukuthatha isigqibo ngokwenza izikhundla zesondo ezivelisa ukoneliseka okukhulu kwesi sibini.
Sichaza ukuba zeziphi iimpazamo ekufuneka uziphephe xa ulungisa ukutshiswa kwamacala akho ukugcina ubuso obuhambelana kunye nokubonakala okuhle ngokubanzi.
Ukuba ujonge ukwandisa ubunzima obungqonge njengeyona nto iphambili kwaye hayi ubunzima nje, kuya kufuneka ugxininise kwezi ngcebiso zilandelayo, kwaye ke unethemba lokufumana i-2 kilos yemisipha emsulwa yokwenza yonke into ngokuchanekileyo.
Enye yeepropathi ezaziwa kakhulu nge nutmeg kukukhuthaza inkumbulo kunye noxinzelelo.
Ukucheba i-anus ngaphandle kokuzenzakalisa nokukhathalela impilo yolusu, kuya kufuneka usebenzise i-wax.
Kucetyiswa ukuba uhlambe ngaphambi kokungena echibini. Ngokwenyani, oku kususa ukungcola okukhoyo kwinqanaba leenyawo ukusuka ekuphumeni echibini.
Xa sele kwenziwe i-oli yeendevu, galela intwana kwindevu ukuqala kwingcambu.
Sichaza ukuba loluphi uhlobo lweendevu olugqwesileyo kumadoda anobuso obude kwaye kutheni.
Ubungqina beGentlemen: Lacoste L! Ve
I-Lacoste L! Ve esisiqholo esitsha nesoyikisayo esivela eLacoste esimangalisa zombini kuyilo lwaso lwangaphambili kunye nesiqholo saso esikhethekileyo
Ungawathambisa njani amasende?
Ukucheba yeyona ndlela iqhelekileyo yokususa iinwele kumatyhalarha.
Iingcebiso zokusebenzisa i-petroleum jelly yeenwele
I-Vaseline ilungele iinwele ezondlayo kunye ne-hydrating deep.
Ungalifumana njani unyamezelo ekudadeni?
Ukuba awuyongcali kwisitayile esithile sokuqubha, kuyacetyiswa ukuba utshintshe isitayile sakho kubude.
Iimpawu zomhlaza wedlala lobudoda
Izinto ezininzi zinokunyusa umngcipheko womhlaza wedlala lobudoda, njengokuba ungaphezulu kweminyaka engama-60 ubudala, unamatyala omhlaza wedlala losapho.
Izibonelelo zerosemary yeenwele
Izibonelelo ezibalaseleyo zerosemary kukuba kuthintela ngokufanelekileyo ukulahleka kweenwele.
Iingcebiso zokwenza iindevu zikhule ngokukhawuleza
Okokuqala, kufuneka uyeke iindevu ukuba zikhule kwaye ungachebi kwiiveki zokuqala ezintathu okanye ezine zokukhula.
Kukulungele ukusebenzisa ubuchule obuqinisekisiweyo bokuphumla, i-yoga, ukucamngca, ukuziqonda ngokwakho, zezinye zeendlela ezinokukunceda uzive ungcono kwaye ukhulule umoya wakho kumaxhala emihla ngemihla.
I-hydrogen peroxide ineempawu zokulwa neentsholongwane ezenza ukuba ibe ngumanyano olungileyo kunyango lwamabala.
Sithetha ngokungenazintloni malunga neenwele zaseburhulumenteni zasesidlangalaleni: izizathu zokuzikhathalela, ukhetho lokuzinxiba, izibonelelo ...
Iinwele ezimangalisayo zamadoda abuyela umva
Sijonga ezinye zezona ndlela zibalaseleyo zokukhetha ezinamadoda xa kufikwa ekama iinwele. Uya kumangaliswa yindlela ezimnandi ngayo ezi nkangeleko.
Iingcebiso zokususa ivumba lokubila ezingubeni
Okokuqala, kungcono ukuthatha amanyathelo kwangoko kwaye uphathe iimpahla ezinuka umbilo ngokukhawuleza.
Uyisebenzisa njani iplagi yempundu?
Iplagi ezimpundu yinto elungileyo yokudlala ngesondo ukuqala ngesondo ezimpundu, incinci kwaye icace ngakumbi kunento yokudlala ngesondo ezimpundu, kwaye kuhlala kukho iplagi ekugqibeleni ukuze wena okanye iqabane lakho niyiphathe kakuhle, kwaye nithintele into yokudlala ukusuka kuhlala ngaphakathi kwi-anus.
UFofisano, ifashoni yamadoda amatsha aqhuba abafazi
Ifashoni entsha ebonakale kwinethiwekhi yoluntu, i-fofisano yile meko yokuba amadoda abonise isisu ngaphandle kwezakhiwo. Okanye ukuba neqhayiya ngomzimba wakho, nokuba awuyongxaki yamagumbi obunzima.
Ungazisusa njani iinwele zangaphakathi ze-pubic?
Ukuba iinwele ezingakhuliyo zenze amaqhakuva, akufuneki zaphulwe, kodwa linda ide izigqobhoze ukuze iinwele ziphume kwaye ukwazi ukuzikhupha.
Ukwenza ikrimu eyenziwe ekhaya esekwe kwibhotolo ye-shea ukuthambisa iindevu, udinga iigram ezingama-50 zebhotela ye-shea, iimililitha ezingama-25 zeoyile yeavokhado kunye namathontsi ama-5 eoyile ebalulekileyo ylang ylang.
I-Conditioner yimveliso ebalulekileyo yokuhambisa amanzi emva kokuhlamba.